Madaxweyne Ku-xigeenka oo Furay Casriyeyn lagu sameeyey Madaarka Hargeysa iyo Duullimaadyo loo wareejiyey Garoonka Berbera | Berberanews.com
Home WARARKA Madaxweyne Ku-xigeenka oo Furay Casriyeyn lagu sameeyey Madaarka Hargeysa iyo Duullimaadyo loo...
Madaxweyne Ku-xigeenka oo Furay Casriyeyn lagu sameeyey Madaarka Hargeysa iyo Duullimaadyo loo wareejiyey Garoonka Berbera
Hargeysa-(Berberanews)- Madaxweyne Ku xigeenka Somaliland Md. C/Raxmaan Cabdilaahi ismaaciil (Saylici) ayaa maanta furay dhismaha Terminal cusub oo laga hirgeliyay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Cigaal ee magaalada Hargeysa iyo dhismeyaal cusub oo lagu soo kordhiyay.
Madaxweyne Ku-xigeenka Somaliland Md. C/Raxmaan Cabdillaahi Ismaaciil (Saylici) oo ay weheliyeen Wasiirrada Duulista Hawadda, Arrimaha Gudaha, Hawlaha Guud, Taliyaha Ciidanka Booliska, Guddoomiyaha Xisbiga kulmiye iyo Madax ka tirsan Ha’yadda UNDP waxay saaka kormeer ku soo mareen xafiisyada iyo qeybaha kala duwan ee Madaarka Hargeysa lagu soo kordhiyey, kuwaasi oo lagu qalabeeyay kamarado iyo aalado kale oo loogu talo-galay dhinaca ammaanka oo ay ugu deeqday dawladda Ingiriiska.
Wasiirka Wasaaradda Duulista Hawadda iyo gaadiidka cirka Somaliland Md. Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa Madaxweyne Ku-xigeenka uga xog-warramay dhismeyaasha cusub ee madaarka lagu soo kordhiyay, waxaanu tilmaamay in aan madaarka Hargeysa oo la dhisay 1958-kii markii u horeysay ay ku soo kordhiyeen goobaha rakaabka loogu adeego ee Terminal-ka loo yaqaano iyo xafiisyo cusub oo loogu tallo galay inay ku hawl-galaan hawl-wadeenadda laanta socdaalka iyo maaliyadda.
Waxa ugu horrayn Madaxweyn ku-xigeenka Somaliland warbixin ka siiyey Agaasimaha guud ee Wasaaradda Duulista hawada Axmed Dalal Faarax. Waxaanu Agaasimuhu ka hadlay wax yaabaha uu ku soo kordhiyey Wasiira Wasaarada duulista iyo hawada Somaliland. “Waanu ku guulaysanay oo Wasiirka Wasaarada duulista iyo hawada Somaliland wax qabadkisii kawad uu ku gulaystay kani weeye iyo . Qabta labaad ee aanu durkinay waxa weeye laanta socdaalka oo lagu rakibay qalab elektarooniga, kaas oo casriya. Xaladii hore ee madarka Hargeysa ku sugnaa waanu ka gudubnay oo qabtayadii abniga waxaanu ka dhignay qalabka casiriga ah eek u shaqaynaaya laydhka.” Sidaas ayuu yidhi Agaasimaha Wasaaradda Duulistu.
Agaasimuhu wuxuu sheegay in diyaaradaha yar yari ay soo fadhiisan karaan madaarka Hargeysa isla mudada ay shaqadda balaadhintu ka socoto. Halka kuwa waaweyn ee Ganacsigana loo wareejiyay madaarka Berbera.
“Maanta uu ballaadhan yahay maansha Allaaha waxa uu qaadikaraa kabaasati aad u wayn oo ah saddex boqol oo rakaaba iyo in kabada oo waxaanu ugu talo galnay shan boqol oo rakaaba. Waanu ku guulaysanay oo Wasiirka Wasaarada duulista iyo hawada Somaliland wax qabadkisii kawad uu ku gulaystay kani weeye iyo qaybta labaad ee aanu durkinay waxa weeye laanta socdaalka oo lagu rakibay qalab elektarooniga, kaas oo casriya.” Ayuu yidhi Agaasimaha guud Md. Dalal.
Agaasimaha guud ee Wasaaradda Duulista Hawada Somaliland Axmed Dalal oo hadalkiisa sii wataa wuxu yidhi; “Xaaladdii hore ee madarka Hargeysa ku sugnaa waanu ka gudubnay oo qabtayadii abniga waxaanu ka dhignay qalabka casiriga ah eek u shaqaynaaya laydhka. Oo sida madaarda adduunku ugu shaqeeyaan ayaanu ka dhignay oo waxa halkan ii jooga koox sakuuritiya oo ka kooban saddex, kuna shaqaynaysa qalabkan iyo waliba madaxa sakuuritiga. Marka intaas laga udbo qofku halkaas ayuu isa-soo tagayaa oo alaabtisii oo dhan waxa uu dhiganayaa meel loogu talagalay, in yar oo elegtarooniga haduusito halkan ayuu dhiganayaa, iyada oo sakuyuuratiguna uu eegaayo dhaqdhaqaa uu sameenaayo.”
“Waxa kale ee lagu soo kordhiyey qalabkii dabka loogu talogalay haddii uu dab dhaco iyo meel dadku ay kabixikaraan, markii hore waxa ragga iyo Dumarka ka dhaxayn jiray Misaajid kaliye, lakin immika waxaanu samaynay laba misaajid kii raga iyo kii Dumarka oo mid walba uu ku tukanaayo misaajid gaara. Qalabkaasi waa qalabkii 1958-kii la galiyey terminaalka (Terminal) oo kan ayuu ahan jiray garoonka sogalitaan iyo ka bixitaan, xilligaas ayaa daqadahana lagaliyey aanu ka bedelnay oo waa kuwan halkan yaala anaga oo xasuus u haysana.” Ayuu yidhi Agaasimaha Duulistu.
Waxaanu isagoo hadalkiisa sii wata intaa ku daray; “Markii hore waxa uu ahaa 2.4 Kgm, ilaa tagsi wayga laga leexanaayo waxa lagu daray 600, halka diyaaradu ay gasho oo kun iyo siddeed boqol (1700) way ku filan tahay oo immika waxa la soo bilabayaa kun iyo siddeed boqol ( 1800).”
Wasiirka Wasaaradda Duulista Hawada iyo Gaadiidka Cirka Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi oo isaguna Madaxweyne ku-xigeenka warbixin ka siinayey hawlaha la qabtay iyo waxyaabaha qorshaha ugu jira ee garoonka diyaaradaha Hargeysa, waxa uu yidhi; “Diyaaradii East afrika waxay ka dagaysaa madaarka Berbera oo waxa ka soo qadaysa diyaarada dhash eedhka ah ee qaada dhawr iyo sodonka eel eh maraxawadaha. Jabuutina waxa u baxaaya dhash eedhkaas ee dhawr iyo sodonka qaada. Qolada Itoobiyaanka waxaanu isla wadnaa barnaamij caynkaas ah.”
“Waxa halkan ka hawlgala Ciidamada amaanka iyo qolada Dab-damiska ee wadada diyaaraduhu ay cagada soo dhigtan ama kahadaan iyo qoladanadiifinta oo waxay ku kala jiraan dhawr baabuur. Waxa kale oo iyaguna gacan buuxda nagasiiya xagga nabadgalyada Ciidamada Booliska oo iyaguna wixii dusha maraaya ka korjoogteeya iyo wixii meesha diyaaraduhu ka soo fadhiistaa ama ka duula dusha ka illaaliya oo wxii eeryadaas oo dhan ayey ka hawlgalaan, kamana fadhiistaan siisocod iyo soo socdba.” Sidaa ayuu yidhi Wasiirka Duulista hawada Somaliland.
Waxaanu Wasiirka oo hadalkiisa sii wataa intaa ku daray oo uu yidhi; “Madaxweyne wax yaabaha xidhitaanki dib loogu dhigay waxa ka mida anagu 01 Mayl ayaanu nidhi ha laxidho oo ha labilaabo jabinta. Markaa ACOa iyada ayaa waxan kacanta ku haysa, arrinkayagii waxay ku dartay saddex wiig in lagudaro kaas oo saddex ujeedo salka ku haya, in dhamaan dhirta ku teedsan haawayga ama wadada garoonka ee labalaadhinaayo in laga jaro oo taawarkeenu ka arkimaayo diyaarada halkan soo fadhiisanaysa oo anagu markii hore waxaanu ku talojirnay gaadhi yar oo xaajiyada inuu laliyo. Iyagu waxay leeyihiin waxaanu keenaynaa gaadhi fiican oo halkan ku melaysnaada, madaama uu arkayn halkan.”
Wasiirka Duulista Hawada Somaliland Maxamuud Xaashi oo ka hadlaya waxyaabaha laga beddali doono Taawarka Diyaaradaha laga hago ee garoonka Hargeysa, waxa uu yidhi; “Tawarakana mustaqbalka inta ran-weyga la dhisaayo waa la dheeraynayaa, madaama radhweygii qayb cusub lagu daraayo in isagana la dhereeyo oo isaga immika ayaa la bilabayaa. Immika inta lagu daraayo radhwayga waxa uu marayaa meelo badan oo jahadaas galbeedka waxa uu u noqonayaa afar boqol (400mtir) oo muwaadinku xaq mulaha inuu ka sameeyo dhisme ee waxa uu ka samayn karaa Beer oo dhismuhu waxa uu samaynayaa soo fadhiisiga diyaaradha.”
Sidoo kale Wasiirka duulista iyo hawada Somaliland waxa uu u mahadnaqay Ha,yadda UNDP oo hawlahan dibu-dhiska ee laga wado garoonka Cigaal Air port international gacan ka gaysatay.
Madaxweyne Ku xigeenka Somaliland Md. C/Raxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) oo ka hadlay halkaasi ayaa sheegay intay Xukuumaddu ay jirtay inay wax badan ka qabteen Madaarka Hargeysa. “Waxa farxad noo ah isbedelka weyn ee ka muuqda madaarka Cigaal International Airport Hargeysa waxa la dhisay. Madaarka waxa la dhisay xiligii gumaystaha Ingiriisku dalka joogay, mudadii intaasi ka dambeysay waxa lagu kordhiyay madaarka dhisme yar oo nasasho ah illaa mudadii la dhisay illaa imika. Inta xukuumaddani jirtayna dhismeyaal badan ayaanu ku soo kordhinay iyo terminal badan. Waa la arki karaa mudadii aanu joognay wax-qabadka aanu samaynay iyo adeegyadda aanu dadweynaha u qabanayno. Waxa wanaagsan in dadweynuhu arkaan wixii la qabtay oo ay muraayad aad u weyn ku eegaan,”ayuu yidhi Madaxweyne Ku xigeenku.
Md. C/Raxmaan Saylici oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “Waxaanu anagu mar walba heegan u nahay haddii aanu xukuumaddii KULMIYE nahay in adeegyadda aasaasiga ah aanu kor u qaadno. Madaarka Hargeysa isbedelka xiligan ka muuqda waa wax aad iyo aad loogu farxo weeye. Waxaana aanu ku ammaanaynaa Wasiirka Duulista iyo hawl-wadeenaddiisa kala shaqeeyayba. Waxa kale oo aanu u mahad naqaynaa Ha’yadda UNDP oo 1 Km iyo 700m dhabada diyaaraha ah ku kordhinaysa madaarka.imika iyo wixii ka dambeeyaba cidii dhoofaysa iyo dadka soo degayaaba waxay madaarka ka helayaan adeeg raaxo ah.”
Madaxweyne Ku xigeenku waxa kale oo uu si weyn ugu mahad celiyay dawladda Ingiriiska oo uu sheegay inay kala shaqeeyeen xukuumadda qalabka sugidda ammaanka Madaarka Hargeysa.
Previous articleSomaliland Government and Traditional Elders Agree on A Five Point Strategy
Next articleJose Mourinho Oo Sheegay Bixitaanka Pep Guardiola In Aanu Wax Faa’ido Ah Usoo Kordhinayn Real Madrid.